Coronavirus Madagascar Olona 59 no voa, tsy mbola misy ny sitrana
Misy an’ireo olona efa mitondra ny tsimok’aretina natao TDR 11. Nisy tamin’ireo site 50, toy hotely, CNaPS, ka 11 ireo voamarina fa voa
. Tsy maintsy natokana aloha, ka ny 6 no vita fitiliana tany amin’ny Institut Pasteur de Madagascar (IPM), ka ny 3 ireo no voamarina fa “positif”. Nisy tany an-trano ary nisy tamin’ny toerana manokana fa samy nanao fanekena hitoka-monina. Nisy ny natao TDR tany an-tranony sy ny nanokanana azy, ary nisy ny natao teny amin’ny CCI sy ny Jumbo Score. Niampy iray omaly, ary 4 ilay nolazain’ny filoham-pirenena ny alarobia ariva teo, ka 59 ny isan’ny olona voatily sy voamarina fa tena tratry ny Covid 19 tamin’ny alalan’ny fitiliana Ilay iray omaly tamin’ny mitatao vovovonana dia tovovavy Malagasy 19 taona, izay vokatry ny fifampikasoana nahavoa azy, mipetraka eny Isotry. Tamin’ny alalan’ny fanadihadiana no nahafahana namantatra azy satria efa nisy ireo olona efa namindrana vazaha nitady ravintsara teny an-toetrana, izay raha ny fanazavan’ny Filoham-pirenena dia namindra tamin’ilay mpivarotra sy zaza 13 taona. Mampanahy tanteraka izany, ary ahiana ho mbola misy olon-kafa mety nifampikasoka tamin’izy ireo miriaria any. Ny zava-dehibe mampieritretritra sy mampandray andraikitra, dia efa miparitaka eny amin’ny fiarahamonina ireo olona, ary efa fantatra hoe: taiza ny toerana nalehan’ireo vazaha, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.Tsy misoritra eny amin’ny endrika ny Coronavirus, ka nanentana ny rehetra ho mailo sy tsy hovoaka ny trano, ny Pr Vololontiana. Hatreto 59 no voatily sy voamarina. Ny 52 dia tao anatin’ny “cas importés”, ny 7 olona teto an-toerana ihany, nifanerasera tamin’ireo vahiny.
MBOLA MIANDRY NY FILAZAM-PAHASITRANANA
Ny 4 afak’omaly, dia 3 tamin’ny TDR “positif” nalefa teny amin’ny IPM: Vahiny 74 taona, lehilahy 64 taona Malagasy, lehilahy 64 taona Malagasy, ary farany dia tsy TDR no nahitana azy fa izy dia mpandeha avy amin’ny AF 939 tonga ny 19 martsa 2020, vehivavy Malagasy 50 taona. “Cas contact” iray, ary “cas importés” miisa 3; 47 tsy misy soritr’aretina ivelany. Tsy misy soritr’aretina ivelany, fa kosa mbola arahi-maso izy ireo fa ho avy ny fotoana satria misy ny “critères de guérison” na ny mason-tsivana ara-pahasitranana hahafahany miverina eny amin’ny fiaraha-monina. Ireo 12, dia ny 4 no misy fahaseporana izay tena atahorana amin’ny Covid. Efa nesorina ny oxygène ho an’ireo sempotra ireo, ary nisy nihatsara sy salama araka ny “scanner”, saingy mbola tsy afaka miteny hoe sitrana. Mbola miandry fitiliana hafa vao azo lazaina fa sitrana. Ny hafa kosa mangorangorana, manavy,… ary mitohy ny fanaraha-maso ara-pahasalamana sy ny fitsaboana.